Angimbambele gqubu lo owayengakhela uzungu lokungibulala - UNdunankulu | News24
Angimbambele gqubu lo owayengakhela uzungu lokungibulala - UNdunankulu
Johannesburg – UNdunankulu waseNorth West, uSupra Mahumapelo, usenxuse owesifazane osolwa ngokumakhela uzungu lokuthi abulawe ukuba akhiphe amagama abantu ayesebenzisana nabo.
UMahumapelo ubephawula mayelana nesitatimende esikhishwe wuphiko oluphenya amacala abucayi – oKlebe – ngoMsombuluko kulandela ukuthi owesifazane, u-Eunice Legalatladi, 44, egwetshwe iminyaka emihlanu ngemuva kokulahlwa yicala lokwakha uzungu lokubulala.
ULegalatladi zamkhalela ngoDisemba 2014 wabekwa icala ezinsolweni zokuthi wacela inyanga ukuba imsize ekutheni abulale u Mahumapelo. Imbangela yalokhu ayikaze itholakale.
"Njengomholi we-ANC, kusho ukuthi ngizibophezele ekubuyisaneni, ekulaphekeni komphefumulo nasekuhlunyelelisweni. Ngakho-ke ngeke ngikwazi ukubamba amagqubu enzondo nokudinwa, yize ngabe ngilele kobandayo manje," kusho uMahumapelo etshela iNews24 ngoMsombuluko ebusuku.
OLUNYE UDABA: UNdunankulu uvikele abakwaGupta, uthi ayikho into ewukulawulwa koMbuso
Kwabikwa ukuthi uLegalatladi wabonakala kumakhamera afihliwe, ayetshalwe ngoKlebe, evuma ukuthi umfuna efile uMahumapelo kanye nalowo owayeyiMeya yaseMahikeng.
UMahumapelo uthe uyakholelwa ekudedeleni ingalo yomthetho ukuba yenze umsebenzi wayo, wathi umndeni wakhe namanje usathukile.
"Umndeni wami usathukile ngoba kusekhona amanye amacala aqhubekayo abantu abane abazama ukungibulala," kusho uMahumapelo.
Lo ndunankulu kuthiwa wakhuluma emhlanganweni womkhandlu wesifundazwe kule nyanga wathi wazi okungenani abantu abangu-9 abamfuna efile. Watshela izintatheli ukuthi igama lakhe lisohlwini lwabaholi be-ANC abazobulawa.